Waajjira Minsiteera Haajaa Alaa Yunaaytid isteets
TPLF fi mootummaan Itiyoopiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufu taanaan, sababaa walitti bu’iinsaan kan dadhabe dinagdee Itiyoophiyaa deggeruuf qophee ta’uu Yunaayitid Isteetis beeksistee jirti.
Prezidaant Baayiden kan mallatteessan ajaja ugguraa waliin wal qabatee tarkaanfiiwwn itti aansuun fudhataman maal akka ta’e illee angawoonni Yunaayitid Isteetis ibsaniiru. Bulchiinsi Baayiden, rakkoon namoomaa kaaba Itiyoophiyaa jiru akka dhumatu trkaanfii isaan fudhatan akan ajaaibsiifatan itti aanaa ministrii yeroofii kan dhimmootii Sudaanii fi gaanfa Afriikaa Biraayan Hant, qaamotiin walitti bu’iinsa sana keessatti hirmaatan, gara mariitti hin dhufan taanaan, uggurri kaa’amu namoota dhuunfaa fi waaltaalee irra darbee, uummata Itiyoophiyaa fi Eertraa irratti kan hin fuuleffanne ta’uu Biraayant Hant ibsaniiru. Yunaayitid Isteetis gargaarsa namoomaa fi deggersa ka biroo Itiyoophiyaaf gootu kan itti fuftu ta’uus dubbatanii jiran.
Mootummaan Itiyoopiyaa fi TPLF lola dhaabiinsa marii irratti hundaa’e irratti mari’achuuf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deddeebi’u eeyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan, daandii addaa hordofuun ni danda’amaj. Yunaayitid Isteetis dinagdeen Itiyoophiyaa akka dandammatu deggeruuf qophee dha.
Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban, tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afriikaan hoogganamu simachuu, gareelee araar teessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba.gargaarsa namoomaa gama ilaaleen, konkolaattonni gargaarsaa akka boodatti hin hafne gochuu, etajaajila bu’uuraa kan akka elektirikii, telekominikeeshinii fi baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda’a jedhan.
Walitti bu’iinsi sun furmaata waraanaan akka hiikamuu hin dandeenye mootummaan Itiyoophiyaa ni hubata jennee abdanna kan jedhan Brayaan Hant, Muummicha ministeeraa Abyiin dabalatuu itti fufiinsaan mari’ataa jirra jedhan jechuu dhaan Kennedy Abate Finfinnee irraa gabaaseera.